Mexin Colour Solar Powered Auto Darkening Welding Helmet miaraka amin'ny petira-pirinty-Auto Darkening Welding Helmet-Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co., Ltd.
Fiarovan-doha famenon'ny rivotra
Eto ianao : Home>Product>Welding Helmet>Auto palitao fanaka mandehandeha fiara
Hijery bebe kokoa +
Mexin Colour Solar Powered Auto Darkening Welding Helmet miaraka amin'ny sticker amin'ny tselatra
Solika kristaly misy kalyona avo lenta, kalitao optika ary fiarovana amin'ny fiarovana ny taratra ultraviolet sy ny tara-pahazavana dia ampiharina mba hiarovana ny mpamatsy lasantsy tsy haratra amin'ny tara-paharatsiana toa ny tara-peo ultraviolet, ny taratra tsy miova.
Ny fantsom-pahazavana kristaly misy alikaola dia manaiky ny teknolojia vaovao amin'ny alàlan'ny fanovana ny jiro mifehy ny hazavana .multilayer LCD sy ny fitaratra misy vata mandainga dia ajanony ny taratra ultraviolet sy infraela ary avelao ny jiro hita maso amin'ny fomba mora mba hiarovana ny mason'ny mpandraharaha, ary avelao izy mandinika mazava tsara lasantsy, ka mihena ny famandrihana miverimberina ary hanatsara ny fahombiazana.
Ny famoronana tany am-boalohany ny teknolojia fanodinana automatique amin'ny fanaraha-maso ny faritra dia ahafahan'ny goggles manova ny fahazavana matanjaka mamirapiratra amin'ny hazavana maizina. Vokatr'izany dia afaka miaro ny mason-kazatra ho voan'ny aretin'ny tampoka.
Ny famolavolana tany am-boalohany ho an'ny mpanohitra Anti-interference dia manalavitra ny tsy ahitanao mazava tsara ny zavatra vita amin'ny lasitsy noho ny manodidina tsy lavitra.
Ny sivana roa dia misoroka ny UV / IR manimba sy ny hazavana mahery vaika manoloana ny raharaha amin'ny herinaratra herinaratra.
Ny akoran'ny PP dia miaro ny tavantsika amin'ny mivezivezy sy ny fitaovana manimba rehefa manantona, mampihena ny mety hisian'ny ratra.
Ny fantsona mangatsiaka, mahomby amin'ny fampihenana ny famoahana entona manimba sy ny vovoka manimba ary fahasimbana hafa amin'ny vatana mba hisorohana ny fisian'ny pneumoconiosis miasa.
Ny fitaovana polimera, ny tanjaka avo, ny leakage maivana dia mety kokoa amin'ny fironana ankehitriny sy ny zotra isan-karazany amin'ny tontolo asa maro.
1） ny fiarovan-doha sy ny azy
2） Kitapo harona plastika amin'ny fiarovan-doha 3） Mandry ny boaty miloko 20 eo amin'ny faran'ny baoritra 4） Asio torolàlana 20 5） Asio fiarovan-doha vy sy satroka 20 ao anaty tranga fanaingoana 6） Fonosana: 725 485mm × 430mm × XNUMXmm）
Fanamarihana: Fampihenana ny isa sy fiakarana raha ampitahaina amin'ny fonosana iray (taloha)
2） Ampidiro amin'ny satroka ny fiarovan-doha
3） Asio torolàlana 16 ao anaty boaty fonosana 4） Asio fiarovan-doha vy sy satroka 16 ao anaty boaty fonosana
Fonosana 5: （540mm × 540mm × 310mm）
Fanamarihana: Tsy misy boaty loko ity fomba fanaingoana ity.
1） Fonosana ny lasantsy
satroka misy kitapo plastika
2） Ampidiro ao ny toromarika
ny boaty loko
3 Apetaho ao anaty boaty loko ny poketra vita amin'ny lasantsy 4） Ampidiro ao anatin'ny fonosana ivelany ny sivana fanenon-tanana feno enina feno 5） Fonosana: 740 345mm × 490mm × XNUMXmm）
Fanamarihana: fihenan'ny volume sy fiakarana isa raha ampitahaina amin'ny fonosana telo (taloha)
zon'ny mpamorona © Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co., Ltd. Tohanan'i Meeall